Ikhaya / Amanzi okugeza / Amanzi ompompi Bokugeza Amanzi / Impophoma yangasese I-Basin Mixer Square Chrome
I-Waterfall Bathroom Faucet Basin Mixer Square Chrome
Lompompi wasendlini yangasese osezingeni eliphezulu uhlanganisa isixubisi samanzi abandayo nompompi ohelezayo. I-MJMS13 iyipayipi lokucwilisa eliyisicaba kumodeli yokwakhiwa yangaleso sikhathi. Imodi yokuhamba kwamanzi ye-waterfall idala ukuhamba kwamanzi okuntekenteke. Akudingeki akhathazeke ngokuchaphazeleka kwamanzi, okulethwa ukuhamba ngamandla kwamanzi. Ufakwe kabanzi ngaphakathi endlini yangasese yasendlini. I-WOWOW ngokungangabazeki ingomunye wabakhiqizi bepompo yangasese abasezingeni eliphakeme emhlabeni.
● Ikhwalithi ephezulu yethusi: ayinacala kubantu, ngoba ayivezi izinto ezingabazisayo.
● I-Chrome-plated: i-mixer i-anticorrosive and immune ukuyifaka, futhi ihlala icacile futhi kulula ukuyigeza.
● I-cartridge ye-Ceramic: ayinamanzi futhi ayivikelekile ekufudumaleni nasekumelaneni nayo.
● Okudingekayo enhlalakahleni yeqiniso ukuthi isixubeki asinalo nhlobo umthofu.
Isisindo: 1400 g
Uhlobo lwamanzi: ibha ye-3-5
Ukuhamba: 7.5 L / min
Ubukhulu: okuphelele okuphelele: 175mm
Ukupakisha uhlu lokuhlola:
1 x Umpompi wempophoma weLavatory
2 x ipayipi lamanzi abandayo nelifudumele
1 x imishini
1 x incwadi yesandla
Impophoma Single Hole Isitsha Indlu yangasese ompompi Ch ...
WOWOW Single Hole Ibha isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu Black sokucwila Fa ...